यौनको कुरा पनि सिकाइ राख्नुपर्छ र? :: Setopati
सृजना पोख्रेल असोज १९
'मेरो बच्चा, झुटो नबोल्नू ल।'
'मेरो बच्चा, अरूको सामान कहिल्यै नचोर्नू ल।'
१४ वर्षको योनीलाई बलात्कार गर्दा कति दुख्यो होला है। त्यति सानो शरीरले कति 'नाइँ! नाइँ!' भन्यो होला।
कुनै केटीको 'नाइँ! नाइँ!' को मूल्य कति लाग्यो होला? ५००?
'मेरो बच्चा, कोही केटीलाई कहिल्यै जबरजस्ती नगर्नू ल। उसलाई मन नलाग्दा नछुनू ल? म केटा हुँ, त्यसैले जो केटीलाई जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने नसोच्नू ल?'
'मेरो बच्चा आफ्नो ठाउँ, जात छाडेर बिहे गर्नुहुन्न ल? संस्कार बिगार्नु हुन्न।'
कसकी छोरीसँग कस्तो 'बिहे-बार' गर्ने भनेर हतार हतार सिकाउँछन्! कसैकी छोरीसँग कस्तो 'व्यवहार' गर्ने सिकाउन चाहिँ किन हतार गर्दैनन् होला?
'छोराछोरीसँग बाआमाले कसरी यौनको कुरा गर्नु? साथीहरूबाट सिकिहाल्छन् नि! यस्तो सानो केटासँग त्यस्तो कुरा गर्नुपर्छ र? यौनको कुरा पनि सिकाउनु पर्छ र?'
अहिले पनि कसैले 'सम्झनाका बाआमालाई १००० रुप्पे देऊ, मिलापत्र गरौं' भनेको भए राजेन्द्रका बाआमाले के भन्थे होला? छोरालाई कंश नै सोचेर मरे हुन्थ्यो भन्थे होलान्? कि आफ्नो छोरा हो सोचेर फेरि बचाउँथे?
जुन दिन 'आफ्नो' मान्छे बलात्कारी हुन्छ, त्यो दिन बलात्कारीका लागि तोकिएको सजाय कम लाग्छ कि लाग्दैन?
यी देशका बालाई पनि राजेन्द्रका बालाई जस्तै, मर्नु र बलात्कार हुनु त्यस्तै विघ्न फरक त लागेको होला है? त्यही भएर त कति सजिलै 'अझै यो देशमा बलात्कारको दर कम छ' भनेर पन्छिदिए। कति सजिलै यतिका सम्झना, निर्मलाको दुखाइलाई अंकमा जोडिदिए।
रामबहादुर थापा राम मात्रै बनेर बाँचेका छैनन्। उनी रामबहादुर थापा 'बादल' हुन्। यी नामका 'बादल' एकदिन त पक्का साँच्चिकै बादल होलान्। त्यसो भएको दिन के हुन्छ होला? अहिले जलेर आकाशमा पुगेकी सम्झनाले ती बादललाई भेटिन् भने? बादलको आँखामा हेरेर आफ्नो आँखाबाट पानी पारिन् भने, के होला?
'छोराछोरीसँग बाआमाले कसरी यौनको कुरा गर्नु? साथीहरूबाट सिकिहाल्छन् नि! यस्तो सानो केटासँग त्यस्तो कुरा गर्नुपर्छ र? यौनको कुरा पनि सिकाइ राख्नुपर्छ र?'